Report from Chinaplas 2018 uye Suzhou Jwell open day - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Chirevo kubva kuChinaplas 2018 uye Suzhou Jwell rakavhurwa zuva
Nguva: 2018-04-25 Hits:
Sezvo inotungamira bhizinesi ye extrusion michina indasitiri, Jwell Machinery iri kunangana nekusimbirira, kurwa uye kugadzirisa, ichitarisa pane ruzivo rwevatengi, kuvaka yakagadziriswa yepasirese extrusion michina eco-cheni! PaChinaplas 2018, vatungamiriri vaJwell vairwira nzira yavo….
Jwell kuvhura zuva
Kuti tipe vatengi vedu nzwisiso yakadzama yeiyo Jwell hunyanzvi 'yakasarudzika manyorerwo uye hunyanzvi hwekugadzira hunyanzvi hweJwell, Suzhou Jwell akatanga chiitiko chezuva rakavhurika panguva yeChinaplas 2018, iyo inogona kurega vatengi vepasirese vauye kukambani. Zvino ngationgororei chiitiko chinoshamisa chezuva rakavhurika raSuzhou Jwell.
Enda kuna Jwell
Vachitungamirwa nemushandi waJwell, vatengi pasi rese vakaenda kuna Jwell vachifara. Jwell akaronga bhazi kutumira vatengi kuSuzhou Jwell.
Jwell akagadzirira kudya kwemasikati kune vatengi pasi rese, achirega shamwari yega yega ichiuya kuJwell kuve neruzivo.
Mushure mekudya kwemasikati, vepamusoro vaJwell vakatora vatengi pasirese kushanyira Jwell, vachigadzira yakajeka uye yakajeka sumo yezvishandiso zvakasiyana zvevatengi, izvo zvaigona kurega vatengi vachinzwisisa zvirinani zvishandiso zvaJwell uye kugadzirwa kwaJwell.
KUMASHURECHINAPLAS2018 --- JWELL STYLE
NEXTCHINAPLAS2018 Kwakanaka Equipment- Yakazara Electric Ridzai richigadzirisa Machine